Isamsung iya kuhlaziya kwi-Android Pie kunyaka olandelayo | I-Androidsis
Isamsung ikhupha uhlaziyo lwePie ye-Android kwangoko kwi-2019
UEder Ferreño | | Samsung, Iinguqulelo ze-Android
Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo I-Android Pie yangena kwimarike ngokusemthethweni. Nangona ngeli xesha, olona hlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza luhamba kancinci kwintengiso. Ngapha koko, ayikaveli kwidatha yokuhanjiswa kwenkqubo yokusebenza kwezi nyanga zidlulileyo, eziqala ukuba nexhala. Kancinci kancinci siyabona ukuba amafemu aqala njani ukuhlaziya iifowuni zawo. Nangona i-Samsung ingekaqali okwangoku.
Ifemu yaseKorea ayisiyiyo enye yezona zibalulekileyo kwicandelo lohlaziyo. Abasebenzisi abaninzi basalinde ukufumana i-Android Oreo. Kodwa Sele ndibhengezile ukuba i-Android Pie iza kuqala nini ukufikelela kwiifowuni zabo.
Iza kuvela ku Ekuqaleni konyaka olandelayo xa iifowuni ze-Samsung ziqala ukufumana olu hlaziyo kwiPie ye-Android. Okwangoku sele kukho iimodeli ezininzi eziqinisekisiweyo kwindalo yonke ye-Android, njengoko ubona kolu luhlu. Nangona kwimeko yenkampani yaseKorea bekungekho nenye idatha okwangoku.
Akukho nto ithethiweyo malunga nokuba yeyiphi imodeli eya kuba yeyokuqala ukufikelela kuyo. Nangona kubonakala ngathi i-Galaxy S9 iya kuba ne-beta kungekudala. Eyona nto iqhelekileyo iya kuba kukuphela kwesiphelo se-Samsung esisungulwe kwi-2018 ukuba ibe yeyokuqala ukufumana le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza.
Nangona ukwazi iimodeli ezithile kunye nemihla ethile, kubonakala ngathi kuya kufuneka silinde ithutyana. Kodwa siyathemba ukuba i-Samsung iyakucacisa ngakumbi malunga noku uhlaziyo kwiPie ye-Android kwiifowuni zabo. Kuba amanqaku amaninzi alahlekile ukuba achazwe ngokucacileyo.
Ke abasebenzisi abanefowuni ye-Samsung Kuya kufuneka ulinde de kube ngu-2019 ukufumana iPie ye-Android. Inkampani sele isungule iwebhusayithi ye-beta yale nguqulo yenkqubo yokusebenza, ke kuya kufuneka baqale ngenkqubo ye-beta kungekudala. Kwaye ekuqaleni konyaka uhlaziyo lokugqibela lwaluza kufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Isamsung ikhupha uhlaziyo lwePie ye-Android kwangoko kwi-2019
Indlela yokuba nephepha lodonga elahlukileyo yonke imihla kwi-Android
Isamsung ilungiselela ifowuni yayo yokudlala, ngokwengxelo entsha